မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ဘလော့ဂါတွေအတွက်ရော စာဖတ်သူတွေအတွက်ပါအဆင်ပြေစေတဲ့PDF
ဒီနည်းလေးကတော့ စာဖတ်သူရော စာရေးသူတွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေစေမှာ
ဖြစ်ပါတယ် မိမိတို့ ရဲ့ ၀က်ဆိုဒ်မှာ PDF Icon လေးတစ်ခုကို အပိုထည့်ထားပေး
ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာပြည်စာဖတ်သူများကို များစွာအထောက်ကူ ပြုရာရောက်ပါ
တယ် ဟန်ဂျီအင်းကပြောတယ် စာတွေအိမ်ရောက်မှဖတ်ချင်တာတဲ့ ဆိုင်မှာသုံး
ရတာအချိန်မရတော့ ဘီလိုလုပ်ရပတဲ့ Word နဲ့ ဆေ့သွားလို့ ရသလို မော်ဇီလာ
ရှိနေမယ်ဆို Web Page Complete နဲ့ဆေ့သွားရင် အိမ်မှာပြန်ဖတ်လို့ တော့
အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် အခု ဒီနည်းကတော့ PDF ဖိုင်နဲ့ ဆေ့သွားလို့ ရအောင်
လုပ်ထားပေးပါတယ် စာဖတ်သူအတွက် အကျိုးရှိ စေမယ့်နည်းလေးတစ်ခုမလို့ 
ဘလော့ပေါ်မှာ မသိသေးသော အခြေခံဘလော့ဂါ ပေါက်စများကို ဘလော့ဂါ
ပေါက်စလေး မောင်တလုံးမှ လေးစွားစွာ အသိပေးမျှဝေအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား...။
( ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်း)နာရင်းအုပ်သံ မဟုတ်ပါ..
Author Anonymous at 6:11:00 PM
ကျေးဇူး တစ်လုံးတည်းသောမောင် ဟစ်ဟစ်။ ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်း ဘာသံပါလိမ့်?
ကျေးဇူးပါဗျို့..ဖြောင်း ဖြောင်း. ဖြောင်း
ဘူလဲကွ..ရစ်မနဲ့မေ၀င်း တယောက်ယောက်ယောက်ပဲ..န ဟန်ဂျီအင်းကို